I-CCA inxusa imingenelo ye-Cabaret and Beyond Festival 2021 yokuqala.
I-Centre for Creative Arts (i-CCA) yaseKolishi lezesiNtu imemezele ukuthi izokwethula i-Cabaret and Beyond (i-CAB) Festival yokuqala yangonyaka wezi-2021. Lomcimbi ozoba minyaka yonke inhloso yawo ngukuhlanganisa amaciko omculo weshashalazi aseNingizimu Afrika yonke. Uzogqugquzela, uthuthukise, uvule ithuba lokuthi kuqanjwe izingoma ezintsha futhi kubhalwe nemidlalo yeshashalazi emkhakheni wezomculo weshashalazi, i-cabaret, nemidlalo enomculo.
Abaqambi bomculo weshashalazi, ababhali bezingoma nababhali bezincwadi bayamenywa ukuthi bafake izicelo zokuba kwiFestiveli. Umnqamlajuqu wezicelo ngumhla wesi-6 kuNhlangulana.
Abahleli bayabazi ubuhle balemboni ezweni kanti bazosebenzisa lesisigcawu ukugqugquzela ukuthi kunikwe ababhali abasha ithuba lokubhala nelokukhangisa ngemisebenzi yabo ehambisana nesikhathi samanje nakuba inendawo kaqedisizungu okuhambisana naloluhlobo lomculo, ibe ifaka nezethameli ngendikimba yefestiveli ethi Cross-wired.
Umqondisi we-CCA uDkt u-Ismail Mahomed uthe: ‘I-Cross-wired inika ababhali bemidlalo yeshashalazi inkundla yokuthi benze ezinye izinto lapho kuhlangana khona izinto kanjalo nezingenza ukuthi kuqanjwe izingoma ezintsha. Izokwenza ukuthi zivele zidedelwe kunganqenwa ukwenza izinto ezintsha.’
I-CCA iqoke umfundisi womculo uDkt u-Roland Perold ukuthi abe ngumhleli we-CAB Festival. U-Perold unesitifiketi se-Musical Theatre Performance ne-M.Mus in Songwriting yase-Bath Spa University e-UK. Ubhale, waphinde wakhiqiza imidlalo yomculo weshashalazi kanti uyisishabasheki sokubhalwa komculo omusha.
‘I-CAB Festival ivulelekile ezicelweni ezingenqeni ukwenza izinto ezintsha, ezishukumisa loluhlelo lomculo kanjalo nemisebenzi yomculo weshashalazi,’ kusho u-Perold.
Labo abafisa ukubamba iqhaza kufanele bagcwalise ifomu ngaphambi komhla wesi-6 kuNhlangulana. Abakhethelwe i-CAB Festival bazomenyezelwa mhla wama-21 kuNhlangulana. Abafake izicelo abaphumelele bazokhokhelwa uR2 500 ngeculo elizoqokelwa ukudlalwa ngoMfumfu wangowezi-2021. Uma umculi noma umbhali befisa ukubambisana, emunye uzothola uR1 800 ngomsebenzi ngamunye abawenzile.
Abahleli be-CAB bazokweseka, bagqugquzele ababhali ngoNtulikazi, uNcwaba noMandulo. Ingoma noma izingoma zokugcina kudingeka ukuthi zithunyelwe mhla we-12 kuMandulo. Ithimba lamaciko laseThekwini liyobe selenza i-CAB Festival Showcase, lethule wonke umsebenzi omusha mhla we-16 kuMfumfu emcimbini we-Poetry Africa festival yama-25.
Ababhali bangabhala izingoma ezifinyelela kwezine, uma befisa. Kuzoba nethimba labane; abantu besilisa ababili nabesifazane ababili. Umqondisi wezobuciko uyomemezela ithimba lamaciko uma sekuphothulwe ukukhetha imingenelo. Ithimba laseThekwini, elinomqondisi nomqondisi womculi noma umshayi wopiyano, lisazomenyezelwa. Uma umbhali efisa ukufaka ezinye izinto emculweni, lezozinto ziyodingidwa nethimba.
Ngemva komcimbi abaqambi noma ababhali ababili abanqobile bayomenyezelwa uma umsebenzi wabo kubonakala ukuthi usengaphuculwa. Emunye uyothola usizo lwemali lokuthi umsebenzi wakhe awenze umdlalo weshashalazi omude ayowuhlanganyela ne-CCA ngoMbasa wezi-2022.
Abafisa ukunge nela bangagcwalisa ifomu etholakala lapha.